दशैंलाई नयाँ नोट : कहाँ पाइन्छ, कति पाइन्छ ? || सुनौलो नेपाल
दशैंलाई नयाँ नोट : कहाँ पाइन्छ, कति पाइन्छ ?
काठमाडौं– नेपाल राष्ट्र बैंकले असोज २१ गतेदेखि सर्वसाधारणका लागि दशैंको नयाँ नोट उपलब्ध गराउने भएको छ । नयाँ नोट लिन लाइनमा बस्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बैंकले विभिन्न शाखाबाट नोट उपलब्ध गराउन लागेको जनाएको छ । यस्तै राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकका शाखामा पनि नयाँ नोट पाइने भएको छ ।
सो व्यवस्थाअनुसार काठमाडौं उपत्यकामा राष्ट्र बैंकको थापाथली बैंकिङ कार्यालयसहित अन्य बैंकका विभिन्न शाखाहरुबाट पनि नयाँ नोट साट्न सकिने भएको छ । नयाँ नोट साट्न सर्वसाधारणलाई सजिलो होस भनेर काठमाडौं उपत्यकाभित्र नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका विभिन्न शाखाहरुबाट समेत नयाँ नोट वितरणको व्यवस्था मिलाइएको छ ।
उपत्यका बाहिरको हकमा भने राष्ट्र बैंकको विराटनगर, जनकपूर, बीरगन्ज, पोखरा, सिद्धार्थनगर, नेपालगन्ज र धनगढी कार्यालयहरु तथा राष्ट्र बैंकको नोटकोष रहेका बाणिज्य बैंक शाखाहरु, नेपाल बैंक, राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक मार्फत नयाँ नोट सटही गरिने ब्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाएको छ ।
बैंकका शाखाहरुले असोज २१ गतेदेखि असोज २९ गतेसम्म सर्बसाधारणलाई नयाँ नोट साट्ने सुविधा दिनेछन् । एक जना व्यक्तिले ५, १०, २० र ५० रुपैयाँ दरका दुई–दुई पाकेट र १०० रुपैयाँ दरका एक पाकेट गरी जम्मा २७ हजार रुपैयाँसम्मका नयाँ नोट साट्न पाउने व्यवस्था गरिएको कार्यकारी बैंकले जनाएको छ ।